Taliyaha Ciidamada Xoogga dalka oo gaaray deegaanka Bariire | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Taliyaha Ciidamada Xoogga dalka oo gaaray deegaanka Bariire
Taliyaha Ciidamada Xoogga dalka oo gaaray deegaanka Bariire
Taliyaha Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed Generaal Axmed Jimcaale ayaa goordhow gaaray deegaanka Bariire ee Gobolka Shabeellaha hoose halkaasoo ay ku soo dhoweeyeen Saraakiil ka tirsan Ciidamada Xoogga dalka ee ku sugan deegaankaasi.
Ujeedka socdaalka Taliyaha Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliya ee uu maanta ku tegay deegaanka Bariire ayaa waxay tahay sidii uu ugu kuur gali lahaa xaalada ay ku sugan yihiin Ciidamada Xoogga dalka ee deegaanka iyo siday u socdaan howlgalka lagu baacsanayo Al-Shabaab ee halkaasi ka socda.
Sidoo kale, S/Gaas Axmed Jimcaale Geeddi oo la hadlayay cutubyo ka tirsan ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan Bariire ayaa sheegay in halkaan la iska fadhin doonin, islamarkaana la qaadayo howlgal saf balaaran oo dalka looga saarayo maleeshiyaadka naf lacaariga Al-Shabaab ee hadda ku sugan qeybo yar oo ka mid ah Soomaaliya.
Maleeshyaadka Al-Shabaab ayaa dhowr jeer weerar ku qaaday deegaanka Bariire gaar ahaan fariisin ay Ciidamada ku leeyihiin deegaanka,waxayna iska caabin xooggan kala kulmeen Ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya.
Previous articleWafdi ka socoda Baarlamaanka Soomaaliya oo lagu soo dhaweyey Mareykanak
Next articleAl-Shabaab oo khasaaro xoogan loogu geystay weerar ay ku qaadeen Boosaaso+(Dhageyso)